Too`annaa yookiin qaaqa filamaniif amaloota ibsi.Amaloonni argaman akaakuu too`annaa filameerratti hundaa`a.Kanaaf, kanneen armaan gadii akaakuu too`annaa maraaf hin argamani.
Filannoo haalata kan too`annaa damee kanaaf dandeessifameerum ifteessi.
Akaakuu qabduu fili. Akaakuuleen qabduu gosa hojii akkamiitu akka jalqabe ni murteessu.
Arfiilee barreefaman osoo hin ta`iin arfii agarsiifamuu danda`an saagi. Kun too`annaa barruu saaguuf gargaara.
Dheerina too`annaa yookiin qaaqa ammee ifteessi.
Barruu gargaarsaa kan akka qajeelcha (bubble help) yeroo hantuuteen too`annaa irra taa`u argisiifamu saagi.
Too`annaa dandeessisuuf "Eeyyee" cuuqaasi. Too`annaan yoo of danda`uu baate, qaaqa keessa ni fajajaa`a.
Furtuu Dhaabata yeroo gargaaramtu xiyyeefanaa amala too`annaa ammee fili.
Yeroo furtuu dhaabata gargaaramtu skiipsi too`annaa xiyyeefachiisi.
Too`annaan furtuu dhaabata wajjin filama.
Dhangii guyyaa too`annaa guyyaaf barbaadame ifteessi. Dhangii qindaa'inoota irratti hundaa`uudhaan too`annaan guyyaa naqaa gargaaramtootaa ni hiika.
Too`annaan lakkoofsa, sharafa, guyyaa, yookiin sa`atiiti arfiilee gataa`aa qofti akka saagaman heeyyamuuf "Eeyyee" cuuqaasi.
Lakkoofsaaf yookiin too`annaa sharafaaf iddoo lakkofsa dhangii ifteessi.
Too`annoo lakkofsaaf akka gargaaru dhangii fili.
Tartiiba wantoota filatamanii, yommuu "0"n wanta duraa faana walqixa ta`e ifteessi. Wanta tokkoo ol filachuuf, Filannoo hedduu dirqama dandeessifamuu qaba.
Qaaqa Filannoo banuuf qabduu ... cuuqaasi.
Wanta yookiin wantoota filuu barbaade cuuuqaasi. Wanta tokkoo ol filuu yoo barbaade, kana gochuuf dirqalaa Filannoo hedduu filamuu isaanii mirkaneessi.
Filannoo hedduu tarree too`annaa keessatti heeyyamuuf "Eeyyee" fili..
Lakkoofsa fuula qaaqa gara too`annaa ammee kamitti akka ramadame yookiin lakkoofsa fuula qaaqa gulaalu barbaade ifteessi. Yoo qaaqan fuula tokko qofa qabaate gatii Fuula (Ejjatoo) isaa gara 0tti jijjiiri.
Too`annaan fuula qaaqa hundaa irratti akka mul`atu gochuuf Fuula (Ejjatoo) = 0 fili.
Fuulota qaaqa gidduu sa`atii darberratti cufuuf, Maakroo gatii Fuula (Ejjatoo) jijjiiru uumuu qabda.
Filannoo gad kaayi tarree yookiin too`annaa sanduuqa makaa dandaassisuuf "Eeyyee" fili. Filannoo dirree gad kaayi qabduu xiyyaa ofkeessaa qaba kunis galiinsa tarree jiran banuuf kan cuuqaasamu dha.
Gargaarsa URL yeroo F1 dhiibdu waamamu garuu too`annaa xiqqoo irratti kan xiyyeefatu ifteessi. Fakkeenyaaf, Help-ID lakkoofsa 1234 wajjin waamuuf dhangii HID:1234 gargaarami.
Help-ID akka gargaarsa qajeelcha baay'ateetti ilaaluuf jijjiiramaa nannoo HELP_DEBUG gara 1 ti gurmeesi.
Gargareessaa lakkoofsaa arfiilee too`annoo lakkoofsaa fi sharafaa keessatti agarsiisuuf "Eeyyee" fili.
Too`annaa ammeef gatii ifteessi.
Qabduu too`annoolee qaanxiif gidduu galeessaa dabalataa fi hir`inaa ifteessi.
Too`annaa ammeef gatii gadaanoo ifteessi
Too`annaa kabala guddinaaf gatii guddinaa ifteessi.
Gatii guddinaa gadaantoo
Too`annaa kabala guddinaaf gatii gadaantoo ifteessi.
Gatii guddinaa max.
Too`annaa kabala guddinaaf gatii olaantoo ifteessi.
Gatii marfata fiixa`aa
Too`annaa kabala maraaf gatii olaantoo ifteessi.
Gatii marfata gadaantoo
Too`annaa kabala maraaf gatii gadaantoo ifteessi.
Gatii too`annaa kabala maraa jalqaba ifteessi. Kun bakka sochooftuu kabala maraa ni murteesa.
Too`annaa ammeef gatii olaantoo ifteessi
Too`annaan dameelakkadoota yoo gulaalama ta`e ifteessi.
Gatiin durtii FALSE dha.
Gulaalii haalata dhaabbate deebisuu
Yeroo gulaaliin damee noodii filanu addaan citu,jijiirama damee deetaa keessattii yookiin jijjirama biraa kessatti maaltu uumama ifteessi.
Qindaa'inni amalaa gara TRUE yommuu gulaaliin addan citu ofummaanolkaa`uuf sababa ta`a.
Qabeentoota too`annaa ammee agarsiisuuf bocquu fili.
guyyaa durtii too`annaa guyyaa keessatti argisiifaman ifteessi.
Too`annaa guyyaaf daangaa gubbaa ifteessi.
Too`annaa guyyaaf daangaa jalaa ifteessi.
Filannoo haala too`annaa ammee fili.
Saanduqni filannoo haalota lama (filatame fi hin filatamne) osoo hin taane haalota sadii (filatame, hin filatamne, and Fajajaa`e) heeyyamuuf "Eeyyee" fili.
Haguugee gulaali too`annaa sarxaaf ifteessi. Kunis lakkaddaa arfii kan dhangii naqaa too`annaaf hiika.
Arfii haguugee tokko tokkoo naqaa arfiif kan gulaali haguugee gatiiiwwan gabatee armaan gadii tarreefamanii keessatti murteesuuf ifteessuun ni barbaachisa:
Barruu dhaabbataa.Arfiin kun itti fayyadamaatiin jijjiiramuu hin danda`u.
Arfiileen a-z iddoo kanatti ni saagamu.Osoo qubee gurguddaan saagame,ofummaan gara qubee xixiqqaatti ni jijjiiramu.
Arfiileen A-Z iddoo kanatti ni saagamu.Osoo qubee xixiqqaan saagame,ofummaan gara qubee gurguddaatti ni jijjiiramu.
Arfiileen a-z fi 0-9 iddoo kanatti ni saagamu.Osoo qubee gurguddaan saagame,ofummaan gara qubee xixiqqaatti ni jijjiiramu.
Arfiileen a-z fi 0-9 iddoo kanatti ni saagamu.Osoo qubee xixiqqaan saagame,ofummaan gara qubee gurguddaatti ni jijjiiramu.
Arfiileen 0-9 qofaan ni saagamu.
Arfiileen maxxansamuu danda`an ni saagamu.
Arfiileen maxxansamuu danda`an ni saagamu. Osoo qubee xixiqqaan saagame,ofummaan gara qubee gurguddaatti ni jijjiiramu.
Too`annaa ammeef halluu fuulduree ifteessi.
Dheerina islaayidii kabala maraa too`annaa ifteessi.
Too`annaa ammeef akaakuu handaara ifteessi.
Too`annaa filameef dirqalaa hiriira ifteessi.
Hojjaa too`annaa ammee yookiin qaaqa ifteessi.
Hojjaa tokko tokko tarree too`annaa damee,piikselii keessaa ifteessi.
Osoo gatiin ifteessamee zeeroo irra xinnaate yookiin walqixxaate, hojjaan tarree olaanaa hojjaa tarreewwan hundaa ti.
Gatiin durtii 0 dha.
Yeroo qabduun hantuuteetoo`annaa irratti kan akka qabduu qaanxii dhiibamtu maddoota ceesistuu irradeebi`i.
Too`annaa sarxaaf gatiiwwan ka`uumsaa argarsiifaman ifteessi. Kunis itti gargaaramaa tokko gatiiwwan too`annaa sarxaa keessatti heeyyamaman akka addaan baasuuf gargaara.Jargifan haguuggee gulaalii haguuggee dhangii ifteessameen ni murtaa`a.
Lakkoofsa safartuu marfata yeroo itti gargaaramtootni bal`ina haqaaqtuu fi xiyyaalee kabala maraa ifteessi.
Lakkoofsa safaratuumarfata yeroo itti gargaaramaan xiyya kabala maraa irratti cuuqaasu ifteessi.
Sanduuqa barruu ifteessitutti akaakuu kabala maraa dabali.
Sanduuqa barruu ifteessituti akaakuu kabala maraa dabala.
Kutaa sarara hujeekaa
Kutaa sarara hujeekaa too`annoolee sarara hedduu keessatti heeyyamuuf "Eeyyee" fili.
Lakkoofsa sararoota saaguun too`annaa tarree in agarsiisa. Qindaa`inni kun sanduuqota makaaf kakaa`aa kan ta`u, qindaa`ina gad kaayi yoodanddeessifame qofa dha.
Hammamtaa too`annaa taasisuuf calaqqee madaali.
Mallattoo mahaallaqa huddeelsoo too`annaa mahaallaqa keesstti yeroo lakkoofsi saagamu agarsiisuuf "Eeyyee" fili.
Too`annaa mahaallaqa akka ooluuf mallattoo mahaallaqa saagi.
Too`annaa ammeef maqaa saagi. Maqaan kun too`annaa addaan baasuuf gargaara.
Matduree qaaqa ifteessi. Qaaqa filuuf qaaqa handaara cuuqaasi.
Matdureewwan kan gargaaran qaaqa moggaasuu fi sarara tokko qofa ofkeessaa qabachuufi. Hubadhu yoo maakroo wajjin hojeta ta`e, too`annoon amala Maqaa isaanii keessaan waamamu.
Max. dheerina barruu
Irraansa lakkoofsa arfiilee itti fayyadamaan saagu ifteessi.
Too`annaa ammee kan galmee maxxansii ofkeessatti qabachuuf "Eeyyee" fili.
Moggaasa too`annaa ammee ifteessi.Moggaasni too`annaa wajjin argarsiisama.
Shift+Enter Gargaaramuudhaaan sarara hedduu moggaasota kutaa sarara hujeekotaa moggaasa keessa saaguun uumuun ni danda`ama.
Naqa sarara hedduu
Naqa sarara hedduu too`annaa keessatti heeyyamuuf "Eeyyee" fili. Kutaa sarara hujeekaa gara too`annaatti saaguuf Galchi dhiibi.
OfnaaGutaa too`annaa filame dandeessisuuf "Eeyyeen" fili.
Qaabchiisa kabala maraaf ifteessi.
Fageenya too`annaa ammee gama bitaa qaaqa irraa ifteessi.
Fageenya too`annaa ammee gama gubbaa qaaqa irraa ifteessi.
Qabdootni noodisi yoo agarsiifamu ta`e ifteessi.
Qabdootni sararoota tuttuqame ta`anii kan walqabaa too`annaa damee agarsiisani dha.
Gatiin durtii TRUE dha.
Dabaluu fi hir`achuu gatii naqa xiyya qabduuwwanii heeyyamuudhaan qabduuwwan qaanxii too`annaa lakkoofsati, sharafati, guyyaati, yookiin sa`atii dabaluuf "Eeyyee" cuuqaasi.
Too`annaa qabduu filannoo durtii ammee gochuuf "Eeyyee" fili.Kakaasuu qaaqa qabduu durtii keessaa Deebii dhiibi.
Ruuttii noodii too`annaa damee yoo agarsiifame ifteessi.
Yoo ruuttiii agarsiifame FALSEtti gurmaa`e, ruuttiin noodii akkayyaa kan noodii gataa`aa too`annaa dameef hin taane fi tooftaa XTreeControl wajjin kan hin gargaare dha.
Ruuttii qabdoota agarsiisi
Qabdootni noodisi dabalataan sadarkaa ruuttiitti yoo agarsiifamu ta`e ifteessi.
Too`annaa qabduu yookiin calaqqeef madda saxaatoo ifteesi. Faayilii filuuf "..." cuuqaasi.
jalqabarraa, too`annoonni lakkoofsota tartiiba isaan qaaqatti dabalamaniin fudhata. Too`annootaaf tartiiba lakkoofsotaa jijjiiruun ni danda`ama. Bu`uuri LibreOffice tartiiba lakkoofsotaa ofummaan jalteenya lakkoofsota dhorkuuf ni jijjiira.Akasumas too`annoon hin xiyyeefatamne gatiitti ni ramadama garuu too`annaan yeroo furtuu Tab gargaaramu ni dhokata.
Mudatoota kabala maraa ceesisi gidduu millii sekoondii kessatti turiinsa ifteessi. Mudatni ceesisi kan uumamu yeroo xiyya kabala maraa yookiin bal`insa duubbee kabala maraa cuuqaastu dha. Mudatootni ceesisi deddeebi`aan kan uumaman yoo qabduun hantuutee gadhiifame yoo xiyya kabala maraa yookiin bal`inni duubbee kabala maraa keessaa cuuqaasame dha.Yoo barbaade, safartuu sa`atii gataa`aa lakkoofsa wajjin saagi,fakkeenyaaf, 2 s yookiin 500 ms.
Too`annaa yeroof gatii yeroo olaanoo ifteessi.
Galiinsa tarree too`annaa tarreef ifteessi.Sarari tokko galiinsa terree tokko fudhata.Sarara haaraa saasguuf Shift+Enter dhiibi.
Too`annaa yeroof gatii yeroo gadaanoo ifteessi.